Ihe Mgbochi PET na-agbanwe agbanwe maka oche oche China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Electric Toilet,Ogige oche dị jụụ,Ụlọ mkpuchi ekpo ọkụ dị ọkụ
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ebe a na-ekpocha ụlọ > Ihe Mgbochi PET na-agbanwe agbanwe maka oche oche
Ihe Nlereanya.: XHC-F066
Na-eche oyi n'oge oyi mgbe ị na-aga ụlọ mposi? Ọ dị mkpa ka ị nwetaghachi ahụ ọkụ n'ahụ gị? Chọta ihe ngwọta gị n'okpuru.
Xinghongchang na-enye gị ebe obibi ụlọ mposi dị ọkụ na nkasi obi. Na-emepụta ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ nke na-enweghị ihe mgbochi, ebe mposi na-enye gị ọkụ na nke ọma n'afọ niile .
Ya mere, kedu ihe nkiri uhie kpụ ọkụ n'ọnụ?
Igwe ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ, nke a maara dị ka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ, bụ ihe ọkụkụ dị iche iche na-ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ mmepe. Ọ na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na-eji radiation radiation infrared. Ọ na-adịgide adịgide ma na-eji ike karịa ike karịa usoro ikpo ọkụ omenala. Site n'ichekwa ọnụego ọkụ na-agbanwe agbanwe , ọ nwere ike iwe ọkụ na nkeji ole na ole. Mmiri na-egbuke egbuke, nke a maara dị ka anyanwụ na-egbuke egbuke nwere ike ịgbasa arịa ọbara, na-egbochi ahụrụ mgbu, mee ka mbelata nke ahụ mmadụ dịkwuo elu ma melite mmetụta nke usoro mgbasa ozi.
Malite usoro ịgwọ ọrịa si ebe a.
Jiri ụdị ụlọ mposi ọ bụla rụọ ọrụ dị ọkụ
Ụdị ọ bụla dị
Ọrụ dị iche iche dị
Voltage ọsọ ọsọ AC 12V
Nkwụsị mbido 5.7-6.3Ω, nkwụsi ike 6Ω
Ike 24W ± 5%
nnukwu voltaji aka 500V / 0.5mA / 2s
nsogbu nchịkọta ≥3Kgf / 1min Ebube ma ọ bụ ọnụ anaghị ada ada
2. Na-edu: UL1430 # 20 akara PVC ọcha
3. Site na Emerson G4A01077C na-ekpuchi, chọrọ akara akara PVC
4. A ghaghị ịchechie isi ihe na-eme ka ịchọta ihe imide ihe nkiri
5. Na 3m9448a nkwụnye aka abụọ na azụ
6. Na JST SSF - 21 t - P1.4 ikpuchi na SLP - 02 v njikọta ọcha
7.Mgbe a ga-edekọ ma ọ bụ mgbe ị kwụsịrị ịkwado nguzogide kwesịrị idekọ na ọnọdụ kwekọrọ
8.N'akwunye ịmepụta akwụkwọ ngwaahịa, ihe ọmụma dị ka nọmba ụda, na ụbọchị mmepụta
1, Ụgwọ : TT, Western Union, Paypal, L / C.
Igwe ọkụ okpomọkụ oche oche dị ọkụ na UL Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Electric Toilet Ogige oche dị jụụ Ụlọ mkpuchi ekpo ọkụ dị ọkụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Electric Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ejiri Igwe Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Carbon Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu